Ihowuliseyili Ihowuliseyili I-75% yoTywala kwangoko I-antibacterial Spray Hand Sanitizer Supplier kunye noMvelisi | Ngcono
Igama lemveliso: Iipesenti ezingama-75 zoTywala ngeso siTsholongwane esitshiza iiNtsholongwane
Inombolo yomzekelo: I-BTX-002
Izinto ezisebenzayo: Utywala i-Ethyl 75%
Izithako ezingasebenziyo: ICarbomer, iTriethanolamine, iGlycerin, iPeg-7 yeGlyceryl Cocoate, iAqua
Ubungakanani: I-17 OZ / 10 i-OZ / 8.5 i-OZ / i-3.4 i-OZ / i-2 i-OZ / i-1 i-OZ
Isiqinisekiso: I-SGS, i-FDA, FIKELELA
Sebenzisa naphina ngaphandle kwamanzi Yongeze i-Moisturuzers Umoya woma ngaphakathi kwesibini
* Ilungele ukuSebenzisa ngaphakathi
.Iindawo zokutyela .Izinto zokuthenga kunye neeVenkile .Izitishi .Izikolo kunye neeDorms .IiGyms .Iimoto kunye nohambo .Ukhathalelo lwempilo .Ofisi
Yandisa iimveliso ezandleni ngokufanelekileyo kwaye uvumele ukuba zome, ungazicimi. Kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-6, sebenzisa kuphela ekubekeni esweni abantu abadala. Ayikhuthazwa ukusetyenziswa neentsana.
Ukunciphisa iintsholongwane kulusu ezinokubangela izifo.
Ukusetyenziswa kwangaphandle kwizandla kuphela.
Izinto ezinokutsha, gcina kude nedangatye okanye umlilo.
* Xa usebenzisa le mveliso
gcina ngamehlo, kwimeko yokudibana namehlo, gungxula kakuhle ngamanzi-Sukungenisa okanye ukungenisa. Gwema ukudibana nolusu olaphukileyo.
Yeka ukusebenzisa kwaye ubuze ugqirha ukuba ubomvu kunye nokucaphuka kuyaphuhliswa okanye ukuba imeko iyaqhubeka ngaphezulu kweeyure ezingama-72.
Sukugcina ngaphezulu kwe-105 F (40.6'C).
Ngamana angalahla amanye amalaphu.
Iyingozi kwiiplastiki ezi-6 zokugqitywa kweenkuni.
Egqithileyo I-Wholesale Wholesale Bamboo Wipes Manufacturers - Ngokukhawuleza uhlambulule i-antibacterial kitchen wipes wipes kitchen wet wipes-Better
Okulandelayo: Imaski yokuKhusela ye-KN95
Isicoci ngesandla esisesikweni
ileyibheli yesiko lokucoca ngesandla
isipreyi sesihlambi sezandla
uhambo lokucoca ngesandla
Elungiselelweyo 75% Utywala Instant elwa namagciwane ...
70% Utywala Instant elwa antibacterial Gel Hand Sani ...
Iipesenti ezingama-75 eziphambili zoTywala obuSebenzayo ...